Mitsetse yeVanhu Vari Kuda Mari muMabhanga Yokura Munyika
Vanhu vakawanda mumaguta mazhinji munyika vanonzi vaswera zvakare vari mumitsetse pamabhanga vachitadza kutora mari dzavo. MuHarare mitsetse yevanhu inonzi yanga yakanyanya kukura pamabhanga ePOSB neCABS.
KwaMutare, vanhu vanonzi vaswera vachirohwa nezuva vari mumitsetse pamabhanga, asi rizhunji rwavo rwunonzi harwuna kubudirira kuwana mari.
KuMasvingo kunonzi rimwe bhanga neChipiri rakatozodaidza mapurisa anodzivirira bongozozo kuti adzinge vanhu vairamba kubva pabhanga apa, kunyange hazvo nguva yekuvhara yakanga yakwana. KuBulawayo mitsetse inonzi yanga iriko asi isina zvayo kunyanya.
Dambudziko iri rinonzi ranyanyowedzerwawo nenyaya yekuti vamwe vashandi vehurumende vakaita sevarairidzi vakawana mihoro yavo pamwe nebhonasi neChipiri.
Sangano rinomirira vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe rati vanhu havafanirwe kutyira kushomeka kwemari, sezvo mabhanga aine mari yakakwana.
Sangano iri riri kukurudzirawo vanhu kuti vashandise makadhi avo ekumabhanga pane kumirira kuti vangoshandisa mari chete. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weBankers Association of Zimbabwe, VaJohn Mushayavanhu, sezvo nhare yavo yanga isingadairwi.
Mutungamiri wesangano revarairidzi, rePTUZ, VaTakavafira Zhou, vaudza Studio 7 kuti varairidzi vakawanda vachatadza kutenga zvavanoda panguva ino yezororo, sezvo vakanonoka kuwana mari dzavo dzebhonasi idzo vangadai vakashandisa dai vakadzipiwa mwedzi wapera.
Nyanzvi mune zveupfumi, uye vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Doctor Godfrey Kanyenze, vati dambudziko ndere kuti mari iri mumabhanga ishoma zvikuru, saka zvinobva zvarema sezvo vanhu vari kuda kutora mari dzavo panguva imwechete.